EX - ABSDF: December 2012
“မဟာမဂ်လာပွဲလုပ်ရန်အတွက်”..မဟာသတို့သမီး အလိုရှိသည်၊ Ko Oo
by Htet Aung on Sunday, December 30, 2012 at 4:16am ဆန္ဒမပြရင် ခေတ်မမီဘူး
ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း ဦးသိန်းစိန် စစ်အစိုးရ ဆင်နွှဲလျှက်ရှိသော ကချင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်သည် အကြမ်းတမ်းဆုံး၊ အရက်စက်ဆုံး၊ လူသားစိတ်မရှိဆုံး၏ ပြယုဂ်ဖြစ်လာသည်။ ပြင်းထန်လှသော
လက်နက်ကြီးများ၊ တိုက် လေယဉ်များ၊ မြောက်များလှစွာသော တပ်အင်အားများကိုပါသုံးပြီး မိမိထက် အဆမတန် အင်အားနည်းပါးသော ကေအိုင်အိုကို ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Read more »
by Mhan Hlaine Nge on Wednesday, February 9, 2011 at 8:22pm ခွဲခွာခဲ့တာ ကြာပြီ ငတ်ငတ်မွတ်မွတ် တမ်းတနေရတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ ...။
ဘ၀မှာ ... အဆုံးအစမဲ့ လမ်းပျောက်နေရင်လည်း
လင်းလက်တောက်ပစွာ ပြန်လာခဲ့ပါ တမ်းတနေမိပါရဲ့ ... မေမေ။
by Ven Ravika on Saturday, December 29, 2012 at 10:46pm ဆွံ့အနေသူများ
အစိုးရတပ်က သမရိုးကျတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များကို ခေတ်မီလက်နက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ရုံမျှမက လေကြောင်းအကူကိုပင် သုံးလာသည်ကို တွေ့ရသောအခါ အံ့သြမိသည်။ ပို၍အံ့သြရသည်မှာ စစ်ဘေးဒဏ်ခံနေရသော ကချင်များကို အခြားတိုင်းရင်းသားများက လျစ်လျူရှုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံအင်အားစုများလည်း ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြဆဲဖြစ်ရာ ဆွံ့အသွားသလို ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနေဖြင့် ခေတ်သစ်တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ဆီသို့ ချင်းနင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဟု ယူဆပါသည်။
Download (ပ) Download (ဒု)
“အဲဒီတော့ ကျုပ်တို့ဟာလူထုရဲ့ခေါင်း ဆောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် လူထုရဲ့အကျိုးကို တကယ်တမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုး ပမ်းကြရပေလိမ့်မယ်။ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ရဲကြရပေလိမ့်မယ်။ ချီတုံချတုံအဖြစ်မျိုး ကိုစွန့်ပစ်ကြရ လိမ့် မယ်။ နိုင်ငံရေးဆောင် ရွက်တယ်ဆိုတာ ‘ကြောက်ရင်လွဲ ရဲမင်းဖြစ်’ ဆိုတဲ့အတိုင်း ရဲနိုင်မှ ဖြစ်မယ်။ Read more »
‎"လစ်ဘရယ်ဝါဒ (Liberalism) နှင့် လစ်ဘရယ်သမိုင်းကြောင်း (အပိုင်း-၃)"
၁၇၆၀ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော စက်မှုတော်လှန်ရေးသည် ၁၉ ရာစုတွင် တဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်
လာပြီး၊ ၄င်းတော်လှန်ရေးကြောင့်ပင် ဥရောပသည် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များအပြင် သိပ္ပံနည်းပညာများ တဟုန်ထိုးပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Read more »
by Myat Thi Ha on Saturday, December 29, 2012 at 4:23am ·
ကျုပ်အခု နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်နေတာဟာ သရဖူကြီး လိုချင်လို့ပဲ၊ ကျုပ်ဆောင်း ဖို့မဟုတ်ဘူး၊ လူထုအားလံုး ဆောင်း ရမယ့် လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့သရဖူကြီးပဲ။ ရဲဘော်တို့ မေးစရာ စကားရှိတယ်။ တကယ်လို့ အကြီးအမှူးတွေထဲက ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကျိုးငဲ့ပြီး လူမျိုးရဲ့အကျိုးနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ ဆန့်ကျင်တဲ့
၂၀၁၂ ကို ကျော်ဖြတ်၍ ၂၀၁၃ ကို ကြိုဆိုခြင်း (The Voice 8-52 Editorial) by The Voice Weekly on Friday, December 28, 2012 at 10:03pm ·
မကြာခင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးကာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကို ရောက်ရှိတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကာလ ရထားသည် မရပ်မနား ရှေ့သို့ သွားနေသည့် တစ်ချိန်တည်း မှာပင် လူ့အဖွဲ့အစည်း တို့တွင် ရှိနေသည့် အရာခပ်သိမ်း သည်လည်း အစဉ်အမြဲ ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲလျက် ရှိပါသည်။ ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲခြင်း သီအိုရီ အရ လူသားမျိုးနွယ်များ တဖြည်းဖြည်း ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော်လည်း ထိုယဉ်ကျေးသော လူသားမျိုးနွယ် ကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးကာ မြေကမ္ဘာ ရှည်ကြာစွာ တည်တံ့ရေး ခြိမ်းခြောက် ခံနေရပါသည်။
ကျောင်းသားသူပုန်တို့ရဲ့ ခရီးရှည်အမှတ်တရ (အပိုင်း-၆)
by Myat Thu on Tuesday, December 18, 2012 at 12:07am နာနာဘာဝများနဲ့ သေ့လောထစခန်း
၁၉၉၁ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း ကျနော်တို့ကို တကွဲတပြားစီဖြစ်စေမယ့် ABSDF တတိယအကြိမ်ညီလာခံကာလမှာ ကျောင်းသားညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ညှိနှိုင်းမရတဲ့အတွက် KNU က ကျောင်းသားတွေ မာနယ်ပလောကနေပြောင်းကြရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်လာတဲ့အတွက် ကျနော်တို့တပ်ရင်း က သံလွင်မြစ်ဆုံအထက် သေ့လောထစခန်းကို ပြောင်းကြရတယ်။
by Myanmar Journal on Friday, December 28, 2012 at 7:02pm ·
မြန်မာ အားကစား တရုတ်ကူညီ
မြန်မာ့ ကိုယ်ကာယ အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ
လာမယ့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကျရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အားကစားသမားတွေကို လေ့ကျင့် ပေးဖို့ အစိုးရ အချင်းချင်းကြား သဘောတူညီချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံက အကူအညီတွေ ပေးနေပါတယ်။
မြန်မာ အားကစားသမား တွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ တရုတ် နည်းပြဆရာတွေ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာ ကြသလို၊ မြန်မာ အားကစားသမား ၁၇၀ ကျော်ကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ သုံးလကြာ သင်ကြား လေ့ကျင့်မှု တွေ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း အားကစားဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
by Aung Htoo on Friday, December 28, 2012 at 4:29am ·
ဤဘလော့ဂ် တွင် ပညာဆိုသည်မှာ ပညာရေးကို မရည်ညွှန်းပါ။ ပညာရေးနှင့် ပညာသည် ဆက်စပ်မှုရှိသလို ကွာခြားမှုလည်း ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတခုခု၏ ပညာရေးစနစ်အပေါ် အခြေခံ၍ ပုံမှန် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ် ထားသော ကျောင်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် သင်ကြားလေ့လာခြင်းကို ပညာရေးဟု နားလည်ပါသည်။ ကျောင်း များတွင် တက်ရောက်လေ့လာ ၍ ပညာရသည်များရှိသလို၊ မိမိကိုယ်တိုင် ဘ၀အတွေ့အကြုံ ဖြတ်သန်းမှုများမှ ပြန်လည်သုံးသပ် ဆင်ခြင်ကာ ရသည့် ပညာများလည်း ရှိပါသည်။ ပညာကို နည်းလမ်း တခု မဟုတ် တခု သုံး၍ ဖြစ်စေ၊ နည်းလမ်းနှစ်ခု လုံးသုံး၍ဖြစ်စေ ရှာဖွေ၍ရနိုင်ပါသည်။
by Myanmar Journal on Friday, December 28, 2012 at 6:36am ·
ဘနာဇီယာ ဘူတိုရဲ့ သား နိုင်ငံရေးထဲ ဝင်ပြီ
အသက် ၂၄ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ဘီလာဝဲလ်ရဲ့ ပထမဆုံး လူထု စည်းဝေးပွဲ မိန့်ခွန်း ဖြစ်ပါတယ်
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဘနာဇီယာ ဘူတို အတွက် နှစ်ပတ်လည် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်း အနား ကျင်းပ နေရာ၊ သားဖြစ်သူ ဘီလာဝဲလ် ဘူတို ဇာဒါရီက သူ့ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ သိန်းနဲ့ချီ တက်ရောက် လာကြတဲ့ ပြည်သူ တွေကို မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
လစ်ဘရယ်ဝါဒ (Liberalism) နှင့် လစ်ဘရယ်သမိုင်းကြောင်း (အပိုင်း-၂)
အင်္ဂလန်နှင့်အမေရိကန်တို့၏ တော်လှန်ရေးမှာ သွေးထွက်သံယိုနည်းပါးခဲ့ပြီး၊ တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးချိန်တွင် လည်း လွတ်လပ်မှုနှင့် လူထုမှာ အသားတကျဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကို မူလရှေးရိုးစွဲဝါဒီ (Classic Conservative)တို့၏ ခေါင်းကိုင် ဖခင်ဖြစ်သော အက်မွန်ဘတ်ခ် (Edmund Burke) (၁၇၂၉-၁၇၉၇)က ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့သည်။
တပ်မတော်သားအချို့ ထိုးကြိတ်သဖြင့် ကလေး ၁ ဦး သေဆုံး
ကျောင်းသူကို အဓမ္မကျင့်သည့် တပ်ကြပ်အား အရပ်ဘက် တရားရုံးသို့ လွှဲပြောင်း ပေးခြင်း မရှိသေး
မိုးထိမိုးမိဒေသရွှေလုပ်သားများ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ထပ်မံညှိနှိုင်းသော်လည်း ပြေလည်မှု မရရှိ
တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ သဘောထား ကြေညာချက် (၂ / ၂၀၁၂)
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သေဆုံးမှု ထိုင်း ၄ ဦး ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
ဒီဇင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်း ဂျာနယ် အမှတ် (၈၅၁)
ဒီဇင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ ဂျာနယ် အမှတ်(၄၁၇)
ဒီဇင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့ ထုတ် Venus News Weekly အတွဲ ၄ အမှတ် ၂၃
ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ ထုတ် HR Journal အမှတ်စဉ် (175)
ဒီဇင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့် သတင်းဂျာနယ် အမှတ် (၃၃)
အိန္ဒိယတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရသည့် မိန်းကလေး သေကြောင်းကြံစည်သွား
NLD ပညာရေးကွန်ယက် ရန်ပုံငွေပွဲ ပထမနေ့ လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ ကျော် ရရှိ
by မင်းခက်ရဲ (Min Khet Ye) on Thursday, December 27, 2012 at 6:20pm ·
ပညာရေးဒဿန ၊ အယူအဆများ (၂၅)
သိပ်မကြာခင်ကာလအတွင်းက ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်းနှစ်ပုဒ်ဟာ ခုကျွန်တော်ပညာရေး ဒဿနအကြောင်းပြောဆိုရမှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးရမယ့် အကြောင်းဖြစ်လာတယ် ။ ပထမ သတင်းတစ်ပုဒ်က ဘောလုံးကန်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ကျောင်းအုပ်ကြီးက ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ရိုက်နှက်တဲ့ သတင်းပဲ ။ ဂျာနယ်တွေရဲ့ ၀ိုင်းဝန်းရေးသားမှုကြောင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးဝန်ချ တောင်းပန်ခဲ့ရတယ် ။ နောက်ထပ် သတင်း တစ်ပုဒ်ကတော့ မူလတန်းအရွယ်ကလေးငယ်ကို ကျောင်းကတောင်းတဲ့အလှုငွေမပေးနိုင်လို့ ဆရာမက ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း ရိုက်နှက်တဲ့ သတင်းပဲ ။ ဒါကိုလည်း ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ် ။ ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်မှာ ဒီသတင်းနှစ်ပုဒ်ဟာ ပညာရေးအတွက်ထူးခြားတဲ့ သတင်းနှစ်ပုဒ်ပဲ ။ Read more »
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လှုပ်ရှားဆောင် ရွက်နိုင်သူ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကာ နိုဗယ်ဆု ရထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဌလည်း ဖြစ်သည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး မရှိလျှင် မည်သည့် အခါတွင်မျှ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ကြောင်း သူမအသိဆုံးပင်။ သို့ပါလျှက် သိန်းနှင့်ချီသည့် ကချင်လူထုများ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေသည်အထိ မီးဟုန်းဟုန်း တောက်နေသည့် ကချင် ပြည်တွင်းစစ်ကို ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှုဒေါင့် မှ နေ၍ ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသေးသည်မှာ ၀မ်းနည်းဘွယ်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ကချင်ပြည်တွင်းစစ်ကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရင်း တပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖေါ်ဆောင်နိုင်မည့် အခွင့် အလန်းရှိနေပါလျှက် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင်လူထုခေါင်းဆောင်သည် အဘယ်ကြောင့် လုံးဝပင် ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ် နေသည်ကို နားမလည်ပါ။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြသနာအား ဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် ဆက်စပ်ဆွေးနွေးပါမည်။ ဥပဒေ၏ သဘောအခြေခံမှ စတင် တင်ပြပါမည်။
အရှက်နည်းသောညများ (သို့) ဒီမိုခရိုနီများမျက်နှာဖုန်းများကွာကျလာခြင်း၊
Myint Aung and5other people sharedaphoto.
ဘုန်းမောင်(ဒုတပ်သား)၊ဆယ်ပြားကျော်ကျော်ဘ၀ကနေ (၁၀) သန်းကျော်ကျော်ဘ၀ကို ခုန်ကူးသွားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါကြောင်ကြောင်လုပ်ရပ်ကြောင့်ငါတို့အားလုံးသိက္ခာကျရတော့မယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော်လှန်ရေးနယ်မြေထဲကလူတစ်ယောက် ဘာအလုပ်မရှိဘာဝင်ငွေမှမရှိပဲချမ်းသာရသလည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းက ကျနော်တို့အားလုံးအတွက် အရှက်တကွဲဖြစ်ရပါတယ်၊ တော်လှန်ရေးလုပ်တာချင်းအတူတူ ကျနော်တို့က ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မွဲနေပေမဲ့ သူတို့လိုလူတွေကအရမ်းကိုချမ်းသာနေခဲ့ကြတယ်၊
Written by ဝေမိုးနိုင်၊မုံရွာ၊ Wednesday, 12 December 2012 20:54
ခွင့်ပြုမိန့်မရဘဲ ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့ သူတွေကို ဥပဒေက ခွင့်ပြုထားတဲ့ ငွေဒဏ်ပဲ ပေးသင့်တယ် (ရုပ်/သံ)
ပြည်သူလူထုနားမခါးစေချင်ပါ . . .[မြတ်ဆွေ]
အစိုးရ တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်သော အမြောက်ဆံ ကျရောက် သဖြင့် အရပ်သားတစ်ဦး သေဆုံးပြီး သုံးဦး ဒဏ်ရာ ရ
စီတန်းပုဒ်မ ၁၈ နှင့် အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် ရန်ကုန်မှာ စာရွက်စာတမ်းများဝေ
မန္တလေးမြို့တွင် ပုဒ်မ၁၈နှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) အား လက်မခံကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်
စနစ်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
တပ်မတော် ပွဲတက်ဝတ်စုံအချို့ ပြောင်းလဲ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေရေး ဂီတပွဲ (ဓါတ်ပုံ)
အဲပုဂံ လေယာဉ် ပျက်ကျရာတွင် သေဆုံးခဲ့သည့် ဆိုင်ကယ်စီးသူ၏ ရုပ်အလောင်းအား မီးသဂြိုလ်ပြီးစီး
ယဉ်ကျေးဖို့ အဖြေရှာ မတွေ့သေးသော လိုင်းကား ယာဉ်မောင်းများနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်များ
လာမည့်နှစ်တွင် လူနေရပ်ကွက်များ လျှပ်စစ်မီးလုံးဝပြတ်တောက်မည်မဟုတ်ဟုဆို
Thursday, October 20, 2011 Sithu Linn သင်္ခါရတရားတွေကို မသိခဲ့လို့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ အာဏာသိမ်းခဲ့မိတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနေ၀င်းက ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း ကိုကိုမောင်ကြီး (ဦးချစ်လှိုင်)ရဲ့ ကျွန်တော်သိသော တစ်ရံရောအခါများ စာအုပ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
၁၉၉၅ ဇူလိုင်လမှာ ဦးနေ၀င်းက သူ့ဆီသွားတဲ့ ဦးချစ်လှိုင်၊ မဆလခေတ် ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးတင်အောင်ဟိန်းတို့ကို ပြောလိုက်တာပါ တဲ့။
"ကိုယ်လူတွေနဲ့ ကြုံတုန်း ပြောလိုက်ရဦးမယ် .... ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒီသံသရာ တရားတွေ သင်္ခါရတရားတွေ အနိစ္စ .... အနတ္တတရားတွေကို ဒီနေ့ သိမြင်သလိုများ ဟိုတုန်းက သိခဲ့မယ် ဆိုရင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လက ကိစ္စကို ကိုယ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး .... ဟုတ်တယ် .... အဲဒီတုန်းကသာ ဒီတရားတွေကို သိနေခဲ့ရင် ၁၉၆၂ က လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်မျိုးကို ကိုယ်မလုပ်ခဲ့ဘူး" (စာ-၇၆၂)
ဦးချစ်လှိုင်က ဒါကို ကြားရတော့ "ဟယ်" ခနဲ ဖြစ်သွားပါတော့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
by Myanmar Journal on Wednesday, December 26, 2012 at 5:16pm ·
‎"လစ်ဘရယ်ဝါဒ (Liberalism) နှင့် လစ်ဘရယ်သမိုင်းကြောင်း (အပိုင်း-၁)"
(၁၂) ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင် ကုန်သည်များသည် ဥရောပတလွှားဖြတ်သန်းသွားလာကာ ကုန်စည် ကူးသန်းကြသည်။ ၄င်းတို့စုဆုံသောနေရာဒေသများသည်စည်ကားသိုက်မြိုက်လာပြီး ကုန်ကူးသန်းရာ အချက်အချာကျသော မြို့များအဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ၄င်းမြို့များတွင်ပင် ကုန်သည်များနှင့် လက်မှုပညာသည်များက အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
စက္ကန့် ၉၀အတွင်း ခရီးသည်တွေ အကုန်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့၊ ပျက်ကျရသည့် အကြောင်းရင်းကို မသိရသေးဟု အဲပုဂံ ရှင်းလင်း (ရုပ်/သံ)
Black Box စစ်ဆေးပြီးမှသာ လေယာဉ်ပျက်ကျမှု အဖြေသိမည်ဟုဆို
မနွယ်လင်းရှိန်၏ မောင်ဖြစ်သူ ကိုလှကျော်ရှိန်နှင့် မေးမြန်းခြင်း
မိန်းမပျို ရောင်းစားနေတဲ့ မြန်မာ ၂ ဦး ထုိုင်းအာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် အတွက် သရုပ်ဆောင်၂၁ဦး ရွေးချယ်မည်
ထန်းတပင်မြို့နယ်မှာ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပိုက်ပေါက် မီးလောင်လျှက်ရှိ
ရခိုင်ပါတီ မသီတာထွေးရဲ့ ရုပ်ပုံနဲ့ ပြက္ခဒိန်ထုတ်ဝေမှု ခေါ်ယူသတိပေးခံရ
သျှမ်းပြည်စစ်ဘေးရှောင်များ အုပ်စုလိုက်ပြည်တော်ပြန်လျှင်နှစ်သက်ရာ ခရိုင်၌နေခွင့်ပြုမည်
ရခိုင် အမျိုးသမီး တဦး လမ်းပြ ခေါ်ဆောင် လာသော ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီများ မင်းတုန်းမြို့တွင် ဖမ်းမိ
ပုသိမ်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာလင်းဝင်းကြီးရွာတွင် စိုက်ဘဏ်ထုတ်ရန် လယ် ၁ ဧက ၃၀၀ ကျပ်နှုန်း ကောက်ခံနေ
တာဝန်ကျ သားဖွားဆရာမ၏ တာဝန်မဲ့မှုကြောင့် ကလေးမိခင်သေဆုံး
ဤမြေနှင့် ဤအရပ်တွင် စိတ်ချလက်ချ နာဖျားခွင့် မရှိ
စံလှိုင် - ဇွန်ဇု၏ စစ်ပညာကျမ်း
by Myanmar Journal on Tuesday, December 25, 2012 at 3:18pm ·
အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေးရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်ကြတဲ့ လူထုကြီးရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း အိန္ဒိယရဲ တဦး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက် - နယူးဒေလီဆေးရုံတရုံမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
Skyheart Winko's photo.
ကျောင်းသားတပ်မတော် ပေါ်ပေါက်လါခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုအားလုံး ဗမာဆိုသော လူမျိုးများအား ယုံကြည်မူ ရလါခြင်းဖြစ်သည်။ အစိုးရတပ် ညစ်ပတ်သလိုသာ လက်နက်ကိုင် ကျောင်းသား၊ လူမျိုးစု တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ပေါင်းစုံမှ အီရက်၊ အာဖဂန်နစ်စတန် ကဲ့သို့ ပြည်တွင်းဝင်၍ နည်းမျိုးစုံဖြင့် အစိုးရအား ဖောက်ခွဲဖျက်စီး အဖျက်အမှောက်များ လုပ်ခဲ့လျှင် တစ်ပြည်လုံးမှာ စစ်မီးကူးဆက်နေပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများမှ ဝေဘန်သုံးသပ်ခြင်း ။ အပိုင်း (၁)
စာရေးသူသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်အရ မဆက်ဆံခဲ့ဘူးသော်လည်း ယုံကြည်ချက်အတွက် သူမ၏ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံခဲ့မှုများအား လေးစား အသိအမှတ်ပြုသူဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာသိခေါင်းဆောင်တဦး ပေါ်လာပြီဟူ၍ သူမအတွက် ဂုဏ်ယူသူများအနက်တွင်လည်း တဦးအဖြစ်ပါဝင်သည်။ မိမိအနေဖြင့် မီဒီယာ များတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောဆို၊ ရေးသားခဲ့ဘူးသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ တကြိမ်မျှ မဝေဘန်ခဲ့ဘူးပါ။ ဘီဘီစီသို့ ယခု ဒီဇင်္ဘာ၂၄ ရက်နေ့နံက်တွင် ပေးခဲ့သောအင်တာဗျူးတွင်မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမတ ဖြစ်ခြင်သည်ဟူသော ပြောဆိုချက်နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အနည်းငယ်စတင် ထောက်ပြခဲ့သည်။
by Win Ko on Tuesday, December 25, 2012 at 3:58am ၁၉၉၆ ဇွန်လ စစ်အစိုးရ၏ ဖြတ်လေးဖြတ်စစ်ဆင်ရေးစီမံချက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့နေထိုင်သော တနီးလဲရွာလေးမှာလည်း လက်နှက်ကြီးဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တို့ကို အလူးအလဲခံစားကြရသည်။ နောက်ဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခိုလှုံခဲ့ကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ရောက်သောအခါ UNHCR မှ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖြင့် ရွက်ဖျင်တဲအမိုး ခြောက်တောင်ပတ်လည်တစ်ချပ်သာ ရရှိကြသည်။ အခြေခံစားသောက်ကုန်နှင့် ဆေးဝါးရိက္ခာတို့မှာ အခက်အခဲဖြစ်နေ ကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံကျန်းမာရေးဌာနကလည်း ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမည်စိုး သောကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးများကို တိုက်ကျွေးပြီး ထိုင်နိုင်ငံအတွင်းပိုင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်မရရှိရေး အတွက် ပိတ်ဆို့ထားကြသည်။ မိုးတွင်းကာလဖြစ်သောကြောင့် ငှက်ဖျားနှင့် ၀မ်းရောဂါတို့ အဖြစ်များနေကြသည်။
by Myanmar Journal on Monday, December 24, 2012 at 11:35pm ·
ခရစ်စမတ် အကြို ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပ
အီတလီ နိုင်ငံ St Peter's Basilica ဘုရားရှိခိုးကျောင်း မှာ လူအများအပြား စုရုံးမလာခင် ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီး ဘန်နာဒစ်က ရိုမန် ကတ်သလစ် ရိုးရာ ခရစ်စမတ် အကြို အခမ်းအနား ဆုတောင်းပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ လူတွေ အနေနဲ့ ဘုရားသခင် အတွက် အချိန်ပေးဖို့ သူက တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ၊ အစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်းကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့နဲ့ လက်ဘနွန် ၊ ဆီးရီးယား နဲ့ အီရတ် နိုင်ငံက ပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့ ဆုတောင်း ခဲ့ပါတယ်။
by Maung Wuntha on Tuesday, December 25, 2012 at 12:22am ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် ၂၇ ၁၂ ၁၂ နေ့ထုတ်တွင် ဖော်ပြသည့် မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ဆောင်းပါး။
တတိယအကြိမ်ဆေးစစ်ဖို့ စင်ကာပူကို ပြန်ရောက်နေတုန်း သည်စာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကီမိုဆေးသွင်းကုသမှု စင်ကာပူမှာ နှစ်ကြိမ်၊ ရန်ကုန်မှာ နှစ်ကြိမ်အပြီး ဒုတိယအကြိမ် ဆေးလာစစ်တုန်းက အဆုတ်က အကြိတ်ရဲ့အရွယ်ပမာဏ အတော်ကလေး ကျုံ့သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးသွင်းကုသမှု ရန်ကုန်မှာ နောက်ထပ် လေးကြိမ်အပြီး ယခုတစ်ကြိမ်မှာ ဆေးစစ်ချက်အဖြေက အကြိတ်ဟာ ထပ်ပြီးလျော့မသွားပေမယ့် ပိုလည်း ကြီးမလာဘူး၊
တစ်ခြားနေရာတွေကိုလည်း ပျံ့နှံ့မှု မရှိဘဲ ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောုင့် ကုသနေတဲ့ သမားတော်က ဆေးတစ်မျိုး ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေးအား အလွဲသုံးစားလုပ်သည့် တပ်ရင်းမှူးအား အရေးယူပါရန် တိုင်ကြားခြင်း
Air Baganလေယာဉ် မတော်တဆမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ဒဏ်ရာရရှိသူများ (ဓါတ်ပုံ)
Air Bagan လေယာဉ် ကွင်းမှားဆင်း အမြီးပိုင်းကျိုးကာ မီးလောင်
ပျက်ကျခဲ့တဲ့ အဲပုဂံလေယာဉ်က ခရီးသည် တွေ ရန်ကုန် ရောက်ရှိ (ရုပ်/သံ)
အဲပုဂံလေယာဉ် ပျက်ကျမှု အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး စစ်မယ် (အသံဖိုင်)
Air Bagan (w9-011) ရန်ကုန်-မန္တလေး-ဟဲဟိုး လေယာဉ် ပျက်ကျမှု မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
ဟဲဟိုးလေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင် ဒဏ်ရာရရှိသူများ ဝိတိုရိယဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိ
လေယဉ်ပျက်ကျ ကလေးငယ် ၁ဦးနှင့် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား ၂ဦးသေဆုံး
အဲပုဂံလေယာဉ်ပေါ်တွင် သေဆုံးသူမှာ ဒေါ်နွယ်လင်းရှိ(၃၄) ဖြစ် ကြောင်း အတည်ပြု
ပျက်စီးသွားသော အဲပုဂံလေယာဉ်၏ အပိုင်းအစ ဓါတ်ပုံများ
အဲပုဂံလေယာဉ် လယ်ကွင်း အတွင်းသို့ မှားယွင်း ဆင်းသက်ခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန သတင်း ထုတ်ပြန်
အဲယားပုဂံ လေယာဉ်တစ်စီး ကွင်းမှားဆင်းသက် ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်
လေယာဉ် ပျက်ကျမှု ၁ ဦး သေဆုံးပြီ ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရကြောင်း Air Bagan သတင်း ထုတ်ပြန်